21 Insanely Practical Gifts for Bloggers to Finally Move the Needle - Sicko News
21 Insanely Practical Gifts for Bloggers to Finally Move the Needle
Haddii adiga ama qof aad taqaanid uu ku cusub yahay qorista blogka ama aad moodid in aad waqti badan kubixinaysid iskudayaga si loo garto waxa waxa loo yaqaan Blogging, sii wad akhriska.
Waad hareeraysaa oo aad aragtaa qaar badan oo kale oo ah kuwa wax qora ee isla waqtigaas bilaabay isla adiga iyo iyaga oo aad moodo inay dhaqso u socdaan.
Dabcan, waa inaadan runtii isbarbar dhigin nafsadaada kuwa kale laakiin waxaad u isticmaaleysaa kaliya qaab bartilmaameed.
Qaar badan oo ka mid ah dadka wax qora ayaa sii wata halganka si ay u helaan nooca natiijooyinka ay filayeen sababta oo ah waxay doorbidaan inay dib-u-soo-saaraan garabka halkii ay ka baran lahaayeen kuwa kale.
Runtu waxay tahay in dariiqa loo maro guusha maahan in si toos ah loo toosiyo maxaa yeelay waxaa jira waxyaalo badan, mowduucyo, shaqsiyaad iyo dhagaystayaal.
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira aalado iyo ilo ay dhammaan dadka wax ku qorayaasha u adeegsan karaan in kasta oo ay ku jiraan nashqadooda, dookhooda iyo mowduuca xiisaha leh.
Boostada, waxaad awood u yeelan doontaa inaad eegto liis ay ku qoran yihiin qalab ka dhigaya hadiyado dhammaystiran, hadiyado wax ku ool ah oo loogu talagalay dadka wax qora ee doonaya inay jebiyaan saqafka galaaskaas.
Bixinta: Fadlan la soco in qoraalkan uu ku jiri karo xiriiryo xiriir la leh taas oo micnaheedu yahay haddii aad iibsato mid ka mid ah alaabada aan ku taliyay waxaa la i siinayaa guddi la wadaagaya xiriirika oo aan kharash dheeraad ah kugu soo kordhinaynin. Kaliya waxaan ku talinlahaa alaabooyin aan iskudayay oo aan ku soo qaatay guulo.
Hadiyadaha loogu talagalay bloggers
Degdeg? >>> Hadiyadan ku kordhisay akhristeyda 537% !! <<<
Hadiyado Aan Caadi Ahayn
Waqti kasta oo aad ka fikirto hadiyad waxa ugu horreeya ee maskaxda ku soo dhaca waa wax lagu dhejin karo sanduuqa hadiyadda.
Markay noqoto blogging tani waxay noqon kartaa mid aad u kala duwanaan karta maxaa yeelay waxyaabaha ay dadka wax qora qora u baahan yihiin caadiyan waa la fahmi karaa.
Waxyaabahan sida caadiga ah waa adeeg la xiriira maxaa yeelay markaad ka fikirto baloog waa wax toos ah oo aan la taaban karin.
Marka laga reebo kiiska shir lagu qabto goob muuqaal ah alaabooyin badan oo kale oo ay dadka wax qora qora u baahan yihiin waa 100% inaan la fahmi karin.
Si aan adiga fikrad kaaga siiyo waxyaabahan waxay u dhaxayn karaan marti gelinta ilaa tababarka ilaa koorsooyinka iyo xitaa softiweerka.
Waxaa jira hal hadiyadood oo loogu talagalay dadka wax qora oo loo kala saari karo inay yihiin wax la taaban karo oo kuwanuna waa buugaag caawiya inta badan maskaxda iyo horumarka shaqsiyeed.
Waxay kuxirantahay halka aad kujirtid safarka buugaagta qaar hadiyadaha ayaa hadda kuu dacwoon doona halka kuwa kale ay horumarsan doonaan ama aad horey u soo martay heerkaas.
Hadiyado loogu talagalay Bloggers
Waxaad ogaan doontaa inaan u kala jabay hadiyado kuwa loogu talo galay boggaga qoloyaal si aan u abaabulo waxyaabo isla markaasna ay sahlan tahay in la helo.
Waa tan liiska dhammaan qeybaha ay u muuqdaan.
Hadiyadaha ugufiican ee Bloggers
Ku dhaji fikradaha ku dheji blogka
Cilmi baarista ereyga
Sidaad arki karto waxaan daboolay tiro balaadhan oo ah alaabooyin iyo adeegyo muhiim u ah guusha blogkaaga.
Haddaba, aan eegno qayb kasta si faahfaahsan sida aad u hesho faham ku saabsan adeegyada ugu fiican ee la heli karo si laguugu helo natiijooyinka aad u baahan tahay.
Haddii aad hore u leedahay baloog la aasaasay markaa tani laga yaabo inaysan xiiso kuu yeelanayn inaad ku qanacsanayn martidaada blogka.
Bilowgayaasha dhammaystiran, waxaan kugula talin lahaa martigeliyahaan inuu yahay meesha ugu wanaagsan ee lagu bilaabo oo lagu iibsado martigelintaada iyaga.
Waxaa macquul ah inaad sidoo kale aad u eegaysay Bluehost sida ikhtiyaar ah laakiin ka hor intaadan go’aan gaarin waxaad fiirisaa dib u eegista aan ku sameyneyno SiteGround vs Bluehost halkan.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad tahay blogger aad u horumarsan oo aad ogaatay in boggaagu uu runtii gaabis noqday 6-dii bilood ee la soo dhaafay markaa eeg xirfadlahan. Waxay si deg deg ah u martigeliyaan baloogyada waaweyn.
Haddii aad hadda uun bilaabeyso blogkaaga oo aad leedahay miisaaniyad yar waxaad ubaahan kartaa inaad ku bilowdo mawduuc bilaash ah adigoo isticmaalaya WordPress.org
GeneratePress – Hadiyad
Ka dheerow WordPress.com maadaama aysan ahayn ikhtiyaar ikhtiyaar u ah is-marti-gelinta ah iyo in kasta oo ay u muuqato mid soo jiidasho leh hadda dhowr sano ka dib waxay ku horseedi doontaa madax xanuun.
Bogagga internet-ka ee horumarsan ayaa qaddarin doona mawduuc u muuqda xirfad dheeraad ah. Waxaan ku talin lahaa mowduuc dhakhso badan, oo suugaan sare leh kan oo kale halkan.
Waxa kale oo aad Jeceshahay Siday Sida Wanaagsan U Hogaamiso Furaha iyo Sanduuqyada Iftiimiyaadka oo Dhaafiya 1% -9% Wax-ka-beddelka 👏
Quruxda isticmaalka aalad sida WordPress.org ayaa ah inaad u adeegsan karto plugins-ka si aad u habayn karto bartaada si aad ugu ekaato una dhaqanto sida aad rabto.
Haddii aad tahay blogger cusub tani waxaa laga yaabaa inaysan ahayn wax aad rabto inaad isla markiiba sameyso maadaama ay waqti kugu qaadaneyso inaad madaxaaga ku wareejiso WordPress.
Adigoo ah blogger horumarsan, waxaad fahmi doontaa inaad rabto inaad kudarto wax qabad kuu ogolaanaya inaad awood u yeelatid inaad kudarto sawirada warbaahinta bulshada ama qaababka qabashada emaylka.
Hal aragti oo muhiim ah ayaa ah baahida loo qabo in la helo sawirro warbaahinta bulshada ah oo cabirro kaladuwan lagu dhejiyay boostadaada si loogu oggolaado akhristayaashaada inay la wadaagaan waxyaabahaaga.
Furaha ugufiican ee laga caawiyo tan waa shey raashin macaan leh oo aad ugu wanaagsan labada boggaga cuntada iyo sidoo kale kuwa wax qora ee aan cunnada aheyn.
Markay noqoto baloog garaynta waxaa jira fikrado dhowr ah oo ku saabsan mowduuca dooro mid aan fiicneyn iyo in kale. Qaar waxay aamminsan yihiin in diiradda la saarey buul ay muhiim tahay
21 Insanely Practical Gifts for Bloggers 21 Insanely Practical Gifts for Bloggers to Finally Move the Needle Bloggers to Finally Move the Needle Insanely Practical Gifts for Bloggers to Finally Move the Needle Practical Gifts for Bloggers to Finally Move the Needle
Is Starting a Business Risky
How to Quit your Job and Start a Business in 12 Easy Steps
Business Tips (9) Featured (10) Finance (3) How To (7) Tips & Tricks (7)
© 2019 Sicko News - Theme by HappyThemes